Ogaysiis Muhiim ah: Digniin ku Dhamaan Jaaliyada Somalida Ogadeeniya UK – Rasaasa News
Ogaysiis Muhiim ah: Digniin ku Dhamaan Jaaliyada Somalida Ogadeeniya UK
Nov 20, 2009 Jaaliyada, Jwxo-shiil, Ogadeeniya
Waxaa la ogaysiinayaa dhamaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee degan dalka Ingriiska, in ay ka digtoonaadaan mardabooyinka nin tooxsiga ah, oo ay baryahan ka wado dalka Ingriiska kooxda baabul khayaama ee halgan bi,iska ah ee uu madaxda u yahay Jwxo-shiil. Kulan ay sheegtay kooxda Jwxo-shiil in ay u qabanayso Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ayeyna waxba ka jirin ee ku egg uun beesha Jwxo-shiil iyo dhibanayaasha daba dhoonka u ah, oo ay ku doonayaan in ay xadaan jeebka dadka u taga.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa waxay ka kooban tahay shakhsiyaad u xaytay burburinta halganka oo iyagu ah kuwa aan lahayn aragti iyo aqoon siyaasadeed oo ay ku hagi karaan halganka, balse kooxdani waxay masuul ka tahay burburka haysta Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo]. Waxayna lee yihiin hal ujeedo oo ah madaama ay ku nool yihiin dibadaha in ay ku caajis baxaan kulano aan ujeedo lahayn oo iyaga iyo faamiladooda u gaar ah.
Kooxda Jwxo-shiil, waxay leedahay Jaaliyad qoysas ah oo aan iyadu raacin sharciga lagu dhisay, waaba hadii ay sharciyeysan tahay, Jaaliyada Jwxo-shiil, waa unug ka tirsan kooxda Jwxo-shiil oo iyadu ku dooda in ay tahay Jabhad u dagaalanta xoreynta Ogadeeniya. waxaa jira Jaaliyado dhawr ah oo ay leedahay Somalida Ogadeeniya, kuwaas oo iyagu fuliya baahida ay qabaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee degan dalka Ingrsiiska.
Waxaa jira dhalinyar ay qaraabo yihiin raga ku jira kooxda Jwxo-shiil, oo iyagu baranaya heesaha doonayana in ay mustaqbalka noqdaan fanaaniin ku shaqaysta fanaanimo, dhalinyaradani waxay u baahan yihiin dad ay ku barbartaan bal in ay heesi karaan.
Hadaba, unugta Jwxo-shiil [Jaaliyadiisa], waxay qabtaan kulano iyaga u gaar ah, waayo ma aha Jaaliyad qabata hawlaha Jaaliyadeed ee ay dadweynuhu uga baahan yihiin dalka Ingriiska ee waxay qabtaa arimo siyaasadeed oo u gaar ah qayb bulshada ka mid ah oo kooxda Jwxo-shiil. Kulana ay qabato Jaaliyada Jwxo-shiil, waxaa yimaada isaga iyo kuwa ku daba socda dabar goynta halganka iyo gumaadka dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo familadooda, waxayna kulanadooda ku uruursadaan lacago ay ku fushadaan dano gaar ah iyo tigidho ay ku dhoof dhoofaan mana jirto wax dan u ah halganka oo ay qabtaan [ruuxii barta in uu si xun u shaqaysto ma waayo masaakiin uu dhaco].
Kulanada ay isugu timaado kooxda Jwxo-shiil iyo Jaaliyadeedu, waxaa yimaada oo kaliya iyaga uun iyo in aan waxba ogayn, waxay albaabka dhigtaan rag cadaan ah oo ka yimaada Yurubta Bari oo qaata lacag aad u yar, waxaa ag istaaga mid iyaga ka mid ah, oo u sheega in uu celiyo dadka aan iyaga ka midka ahayn. Hadiiba dad uu ku soo dhex dhuunto oo uu damco ruuxaasi in uu wax sheego looma ogola waana la bixiyaa.
Waxaa dhab ah in Jaaliyadaha Somalida Ogadeeniya ee jooga dalka Ingriiska in ay si weyn isaga soo horjeedaan oo uusan jirin wax wanaag ah oo u dhaxeeya, balse waxaa dhexyaal colaad iyo dakanayaal uu sabab u yahay Jwxo-shiil oo gaystay dilal. Waxaan jirin oday dhaqameedyo, wax garad iyo aqoon yahan wax laga maqlo, waxayna kala raaceen dhinacyada Jaaliyada.
Hadaba, waxaanu ku war galinaynaa ugana digaynaa dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee degan dalka Ingriiska in ayna ogaal la,aan ugu tagin Jaaliyada Jwxo-shiil, oo sida ay sheegta ku kulmaysa meel u dhaw guriga Jwxo-shiil, waana in ay dadweynuhu ogaadaan in dadka kulanka samaynaya ay yihiin beesha Jwxo-shiil.
rasaas baa runta sheegee rafiiqaaga ka yeel
Dhibaata Abuurka Dhaqaale ku Doonku Dhankuu ka Socdaa!
Xukuumada Eritrea oo Soo Abaabulaysa Qaraxyo Lala Beegsanayo Magaalooyin ka Mid ah Dhulka Somalida Ogadeeniya